Professor Yoshinori Ohsumi Oo Soo Bandhigay Cilmi-Baadhis Uu Ku Ibo- Furay Mucjisada Soonka | Saxafi
Qallinkii Xasan Cumar Hoorri
Professor Yoshinori Ohsumi (Japan)
Ogow, wax kastoo diinteennu innagu waajibisay, Allah waxaa uu ku ladhay ama ku badhxay wax badan oo aynaan ka warqabin, balse, ay innoogu sugan yahiin libinta ifka iyo liibaanta aakhiro. Sidaa darteed, qormadan oo ka tarjimaysa deraasad dhowaan lagu ibo-furay aqoonta kooban ee aadamaha, waxaa ay kor ka xaadinaysaa faa’iido kale oo innogu sugan soomka.
Sannadkii 2016, Professor Yoshinori Ohsumi (Japan) waxaa uu ku guulaystay Abaalmarinta Nobel ee cilmiga sayniska. Abaalmarinta waxaa uu ku mutaystay diraasad uu ku soo bandhigay, kuna daahfuray xeeldheerida aqoonta fisiyoolojiga (physiology) ee lagu lafo-guro qaabka ay u shaqeeyaan unugyada jidhku, gaar ahaan, aqoonta waaxda (Autophagy) ama “Isa-saxartirka Jidhka“.
Diraasadda oo si mug leh loogu falanqeeyay aqoonta iyo qaabka uu jidhku iskiis isugu nadiifiyo ee loo yaqaan (Autophagy) ama “Isa-saxartirka Jidhka“, waxaa lagu iftimiyay sida uu jidhku iskiis isu xalo kolka ugu yaraan 12 saacadood laga soomo cuntada iyo cabbitaanka. Sida diraasaddu tibaaxday, waxaa habboon in nafta la qadiyo sannadkiiba 30 maalmood. Isla markaa, qofkii awooda in uu qadoodiga ku sii daro toddobaadkiiba 2 maalmood oo kala dheer. Halkaa waxaa laga dheehan karaa soomka bisha Ramadaan iyo maalmaha Isniinta iyo Khamiista oo sunne ah. Baadhista cilmiyeed, waxaa kaloo ay ka digtay cuntada joogtada ah oo sida la hubiyay jidhka ku keydisa hadhaa culays ku noqda dheefshiidka kaasoo cudurro fara badan soo kordhiya ama sii huriya kuwii bukaanku hore u qabay.
Inkastoo Muslimka ay ku kala duwan yahiin xilliga, qaabka iyo tirada, soomka waxaa innooga horreeyay ummaddihii kutubtu ku soo degtay, sida kuwa aaminsan Tawraat (Yuhuudda) iyo Injiil (Kiristaan). “Kuwa Xaqa Rumeeyow, Waxaa La Idinku Waajibiyey Soomka Sidii Loogu Waajibiyay Kuwii Idinka Horreeyey, Si Aad U Dhowrsanaataan.” Al Baqarah, aayadda 183. Sidoo kale, dad badan oo haysta caqiidooyin ama falsafado gaca-ku-rimis ah, sida Buddhism, ayaa sooma. Wadaadada Buddhistaha (monks) waxaa ka reebban cuntada waxii ka danbeeya aminta hadhimada. Sidaa darteed, muuqaalkoodu waxaa uu u badan yahay “weyd caafimaad qabta oo firfircoon”.
Haddaba, Prof. Yoshinori Ohsumi waxaa uu jiraa 73 sannadood. Shahaadada milgaha weyn ee Ph.D waxaa uu qaatay 1974. Tan iyo waagaa, waxaa uu wax ka dhigayay Jaamicadda Rockefeller, USA iyo Jaamicadda Tokyo ee Japan. Intaaba, waxaa uu ku fooganaa sidii uu uga niib keeni lahaa baadhitaanka cilmiyeed. Ugu danbeyntii, mar uu ku guda jiray shaybaadhka uu ku sidkay maskadiisa, qalbigiisa iyo nolashiisa., waxaa ku soo dhacday farriintii uu weligiiba u hanqal taagayey. “Hambalyo, waxaa aad ku guulaystay abaalmarinta Nobel.”
“Caruurnimadii wax badan ayaan ku hammiyay abaalmarinta Nobel. Hase ahaatee, markii aan baadhista gudo galay, waxaa aan dib u laqay candhuuftaydii,” ayuu Yoshinori Ohsumi u sheegay warsidaha Guardian isagoo la argagaxsan bogaadinta soo yeedhay. “Markaan arkay yoolka loo tartamayo, ma filayn in aan hanan karo abaalmarinta, balse, waxaa iga go’nayd in aanan ka daalin baadhista”.
Bare Sare Yoshinori Ohsumi, waxaa uu u tafo-xaytay arrin dunida ku cusub. Hubaal, qofkii faraha ku la jira cilmiga Saynisku (science) waxaa uu kala kulmayaa arrimo xiiso badan oo kolba ay soo baxdo kuwo kale oo sii dardar geliya. Aqoon-dhaadhigu markii uu ka bogtay hidde-sidayaasha unugyada, kana faraxashay barashada qaabdhiskooda waxaa uu garowsaday in uu qadoodigu sal u yahay sida unugyada jidhku isu nadiifiyaan. Sannadkii 1992 waxaa uu daabacay buuggiisii ugu horreeyay ee uu ku shaaciyay natiijooyin la taaban karo. Waxaana xusid mudan in uu buugga ku muujiyay, “Qofka sooman in aanu tamar-dhigin xilliga uu afxidhan yahay, balse, waxaa uga sii kordha firfircooni dheeraad ah”.
Si kastaba, ha ahaatee, aqoontu waxaa ay u sugnaatay Allah, dhowrsanaa oo korreyey. Waxaana, if iyo aakhiroba, liibaanaya kuwii u kala dheereeya fulinta waxii uu Allah faray, iskana dhowra waxii uu ka reebay. Allah nimcada Islaamnimo ha innogu kordhiyo hanuunka tubta toosan. Sidaa ayaana lagu kasban karaa guusha if iyo aakhiroba. Balse, waxaa ka horreysa in aan aaminno wax kastoo diintu innagu waajibisay in ay danteenu ku jirto, haddii aqoonta gaaban ee aadamahu soo xaqiijiso iyo haddii ay ka gaabisoba.
Xassan Cumar Horri, Machadka Dimuqraadiyadda Geeska Africa (HID) waa suxufi ka faallooda arrimaha Geeska iyo Bariga Dhexe. Kala xidhiidh hassanhorri@gmail.com ama ku tixraac Twitter #horrimania.
Professor Yoshinori Ohsum
Previous articleWhen Peace Is A Problem
Next articleMohamed Salah Answers: The Kiev Final, The Injury, Ramos, Spain…